जंगबहादुरको मृत्यु रहस्यलाई ‘सोनाम ग्याल्मो’ले स्थापित गर्न खोजेको छ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली – Everest Times News
जंगबहादुरको मृत्यु रहस्यलाई ‘सोनाम ग्याल्मो’ले स्थापित गर्न खोजेको छ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
२०७५ असार २५, सोमबार ०८:५९
काठमाडौं । तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुरलाई जारले काटेको कथामा आधारित नाटक ‘सोनाम ग्याल्मो’ हेर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बत्तिसपुतलीस्थित शिल्पी थिएटर पुगे । नाटक हेरेपछि उनले भने, ‘नाटकमा इतिहासको पुर्नव्याख्या पाए“ । तामाङ सामाजिक जीवनको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरी जंगबहादुरको मृत्युसम्बन्धी रहस्यलाई स्थापित गर्न खोजेको छ नाटकले ।’
फूलमान वलको लेखन र सोनाम मोक्तानको निर्देशन रहेको नाटक असार ११ गतेदेखि नियमित मंचन भइरहेको छ । नाटकले तामाङ मौलिकतालाई रोचक ढंगले पस्केको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘इतिहासको एउटा कालखण्डमा दुःख पाएकाहरुको कथालाई नाटककार वलले टिपेका छन्’, उनले भने, ‘नाटकले भिन्न सांस्कृतिक स्वाद पस्केको छ । मन छोयो ।’
आधिकारिक इतिहास बन्न नसकेको तर तामाङ समुदायमा लोककथाको रुपमा प्रचलित रहेको कथामाथि लेखिएको नाटक हेर्न मन्त्री ज्ञवालीस“गै पुर्वमन्त्री शान्ता मानवी, दिलमान पाख्रिन, सभासद एवं अनेरास्ववियु अध्यक्ष नविना लामा, समालोचक एवं साहित्यकार प्रा. राजेन्द्र सुवेदी, साहित्यकार सरस्वती ज्ञवाली, अनिल पौडेल, राजेन्द्र थापा, प्राज्ञ निमा ग्याम्जो लामा लगायत पनि पुगेका थिए । आइतबार भने कोरियाका लागि पुर्व राजदुत कमानसिंह लामा, तामाङ नायिका रन्जिता ब्लोन, गायिका रेश्मा बमजन लगायतको समुह शिल्पी पुगेको थियो ।
विवाहमा बेहुला र बेहुली राखेर चारदाम (वैवाहिक जीवनको कसम खुवाउने विधि) गर्दैगर्दा नाटक फ्लासब्याकमा जान्छ । त्यसपछि सर्लाही पत्थरघट्टा आसपासको पुरानो तामाङ समाज र जीवनको उत्तरार्धमा त्यही ठाउ“मा शिकार खेल्न गएका जंगबहादुरबिचको संघर्षले नाटकलाई गति प्रदान गर्छ । मुख्य पात्र छन् भर्खरै विवाह भएका सोनाम र ग्याल्मो । ग्याल्मोलाई जंगबहादुरले मन पराएर हरण गरेपछिको पीडादायी सन्दर्भ र उनैले बनाएको ‘जार काट्ने कानुन’ मा टेकेर आइपुग्ने सोनामबीचको उतारचढाव नाटकमा हेर्न सकिन्छ ।
जंगबहादुर कसरी मरे ? त्यो भने रहस्यमै छाडिएको छ । तामाङ संस्कृति, परम्परा र जीवनशैलीको सघनतामा सजिएको नाटकमा तामाङ फिल्मकी चर्चित नायिका चा“दनी लामा, सेलो गायक एवं संगीतकारद्धय फूलकुमार बमजन र सुसन लामाको पनि अभिनय छ । मुख्य पात्र सोनाममा निर्देशक स्वयंले खेलेका छन् भने ग्याल्मोको भुमिकामा शान्ति वाइबा छिन् । यसबाहेक निकिता वाइबा, निशा पाख्रिन, मात्रिका घिमिरे, मनोज तामाङ, सन्तोष तामाङ (बोन्बो), सन्जीव राई, देविन चौधरी, विजय टुबा, सुनिल तामाङ, साजन लामाले अभिनय गरेका छन् ।
सेलो थिएटरको प्रस्तुति रहेको नाटक मंगलबार बाहेक हरेक दिन सा“झ ५ बजे नियमित मञ्चन भइरहेको छ । नाटक असार २५ गतेसम्म मात्रै मञ्चन हुने भनिएको भएपनि दर्शक चापका कारण असार २८ गते सम्म लम्ब्याइएको सेलो थिएटरकी संयोजक एवं अभिनेत्री शान्ति वाइवाले बताइन् ।
10 विश्वगाथा सगरमाथासँग जोडिएका शेर्पा